Iyo inokurumidza kuchaja USB C tambo inouya kune iyo nyowani Apple Watch | IPhone nhau
Yekukurumidza-kuchaja USB C tambo inouya kune iyo nyowani Apple Watch
MuCupertino vanoenderera vachiramba pakuitwa kweiyo USB C chiteshi pane iyo iPhone, isu tese tiri kutarisira kuitiswa asi hapana ... Zvingave zvakanaka kuve nechiteshi chimwe chete pane ese maApple zvishandiso asi izvozvi kusvika kwe USB C kunova kunoshanda mune zvimwe zvese zvigadzirwa uye mune iyi kesi yaive Apple Watch Series 7, zvakare ine nekukurumidza kuchaja.
Hongu, mhando nyowani dzeApple Watch dzinowedzera inokurumidza kuchaja sisitimu iyo mushandisi yaanokwanisa Iva ne80% hupenyu hwebhatiri mumaminitsi makumi mana nemashanu chete. Izvi zvinoreva kuti mawachi matsva anobvumidza chishandiso kuti chibhadharwe zvizere 33% nekukurumidza kupfuura mamodheru apfuura.
Kuzvimiririra kwakanaka uye nekukurumidza kuchaja ne USB C
Chakanakisa pane zvese ndechekuti izvozvi Apple Watch nyowani inopa hupenyu hwebhatiri hunosvika maawa gumi nemasere maererano neApple pachayo uye yakawedzera kukurumidza kuchaja neiyo nyowani USB C tambo isu tine combo yakakwana. Kune rimwe divi, zvakakosha kuti uzive kuti iyi USB C tambo inotengeswa zvakasiyana uye inowirirana zvizere neasara Apple Tarisa kusvika kuChitsauko 1 asi unenge usina kukurumidza kuchaja pavari.
Kubhadharisa iyo Apple Watch imhepo. Uye zviri kusvika ku33% nekukurumidza paApple Watch Series 7, iyo inogona kusvika 80% kubhadharisa mune ingangoita maminetsi makumi mashanu. Iwe unongofanirwa kuunza chinongedzo padyo nechomukati chechiso chewatch uye magineti anotarisira zvese. Icho chisimbiso chakazara chisingaenzaniswi umo kusaonana kuri pachena. Yakanyanya kubatsira zvakare, nekuti hautombodi kuenderana kwakaringana. Kukurumidza kuchaja kunoenderana chete neApple Watch Series 45. Mamwe mamodheru anotora yakajairwa nguva.
Iyo nyowani yemagineti inokurumidza kuchaja tambo ine USB C chinongedzo cheApple Watch Iyo ine kureba kwe1 m uye mutengo muchitoro cheApple chemaeuro makumi matatu nemashanu. Parizvino patiri kunyora chinyorwa ichi, kana iwe ukatenga tambo izvozvi, ichasvika musi waGunyana 17, isu tinofungidzira kuti stock ichawedzera mukati memavhiki ekutumira ipapo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Yekukurumidza-kuchaja USB C tambo inouya kune iyo nyowani Apple Watch
New iPad Mini, Apple's mini inoenda Pro
Iyo iPhone 13 Pro uye iPhone 13 Pro Max vanogovana akafanana makamera